Ch 27 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 27 Matthew
27:1 Avy eo, nony maraina tonga, ny mpitarika rehetra tamin'ny mpisorona sy ny loholona dia niara-nihevitra hiampanga an'i Jesosy, ka dia mba hanolorany azy ho faty.
27:2 Ka nitondra an'i Jesosy, nifatotra, ary natolony an'i Pontio Pilato, ny Procureur.
27:3 Ary Jodasy, ilay namadika Azy, nahita fa efa voaheloka, manenina ny fitondran-tenany, namerina ny sekely volafotsy telo-polo tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona,
27:4 nanao hoe:, "Efa nanota tamin'ny namadika ra marina." Fa hoy izy ireo taminy: "Inona no soa tokony ho antsika? Jereo izany ny tenanao. "
27:5 Ary nanipy teo ny vola ao amin'ny tempoly, dia niala. Ary nivoaka, dia nananton-tena amin'ny fandrika.
27:6 Fa ny mpitarika ny mpisorona, dia nandray ny sekely volafotsy, nanao hoe:, "Tsy mety raha alatsaka an-kianjan'ny tempoly fanatitra, satria vidin-drà. "
27:7 Avy eo, nony niara-nihevitra, dia nividy ny sahan'ny mpanefy vilany izany, ho toy ny toerana ho an'ny vahiny fandevenana.
27:8 Izany no antony, io saha atao hoe Haceldama, izany hoe, 'Ny Sahan-drà,'Na dia mandraka androany.
27:9 Ary izay nolazaina tamin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia tanteraka, nanao hoe:, "Dia nalainy ny sekely volafotsy telo-polo, ny vidin-ny iray ho appraised, izay appraised teo anoloan'ny Zanak'Isiraely,
27:10 ary natolotr'ireo kosa ho an'ny ny sahan'ny mpanefy vilany, araka izay efa nandidian'i Jehovah ahy. "
27:11 Ary Jesosy nitsangana teo anatrehan'ny governora, ary ny governora nanontany azy, nanao hoe:, "Hianao no Mpanjakan'ny Jiosy?"Fa hoy Jesosy taminy, "Ny teninao izany."
27:12 Ary raha nampangain'ny 'ny mpitarika ny mpisorona sy ny anti-panahy, dia namaly na inona na inona.
27:13 Ary hoy Pilato taminy:, "Tsy renao fa tena fijoroana ho vavolombelona hiampanga anareo izy ireo miteny?"
27:14 Ary tsy namaly na teny taminy, ka dia gaga indrindra ny governora.
27:15 Ary tamin'ny fotoam-pivavahana, ny Procureur ny fanaony mba hanafaka ny olona iray voafonja, an'izay tiany.
27:16 Ary tamin'izany andro izany, izy nisy mpifatotra malaza, izay atao hoe Barabasy.
27:17 Noho izany, rehefa tafangona, Hoy Pilato taminy:, "Iza moa no tianareo halefako ho anareo: Barabasy, na i Jesosy, Izay atao hoe Kristy?"
27:18 Fa fantany fa avy tany fialonana no nanolotra azy.
27:19 Fa raha mbola nipetraka tao an-toerana ny fitsarana, ny vadiny dia naniraka hankeo aminy, nanao hoe:: "Izany dia na inona na inona ho anao, ary Izy no marina. Fa efa niaina zavatra maro amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fahitana noho ny. "
27:20 Fa ny mpitarika ny mpisorona sy ny loholona nitaona ny vahoaka, ka dia izy ireo hangataka an'i Barabasy, ary toy izany koa fa i Jesoa dia ho faty.
27:21 Avy eo, ho setrin'ny, ny Procureur hoy izy taminy, "Iza moa amin'izy roa lahy no tianareo mba ho afaka aminao?"Fa hoy izy ireo taminy, "Barabasy."
27:22 Hoy Pilato taminy:, "Dia inona no hataoko momba an'i Jesosy, Izay atao hoe Kristy?"Hoy izy rehetra, "Aoka hohomboana amin'ny hazo fijaliana."
27:23 Ny Procureur hoy izy taminy, "Fa inona moa no ratsy nataony?"Fa izy rehetra niantso mafy vao mainka, nanao hoe:, "Aoka hohomboana amin'ny hazo fijaliana."
27:24 Ary Pilato, nahita fa afaka hanatanteraka na inona na inona, fa tabataba lehibe kokoa no mitranga, naka rano, nanasa tanana teo imason'ny 'ny vahoaka, nanao hoe:: "Manan-tsiny aho ny ran'ny marina ity lehilahy. Jereo izany ny tenanareo. "
27:25 Ary ny vahoaka rehetra namaly tamin'ny hoe:, "Aoka ny ràny ho aminay sy ny zanakay."
27:26 Avy eo dia nandefa an'i Barabasy ho azy ireo. Fa Jesosy, rehefa nokapohiny, dia hatolotra eo an azy, ka dia mba hohomboana tamin'ny hazo fijaliana.
27:27 Ary ny miaramilan'ny ny Procureur, nitondra an'i Jesosy ho any anati-rova, nanangona ny andiana miaramila iray manontolo manodidina azy.
27:28 Ary manala ny azy, dia nasiany lamba jaky manodidina azy.
27:29 Ary plaiting satroka tsilo, dia napetrany teo amin'ny lohany, tamin'ny volotara ny tànany ankavanana,. Ary genuflecting eo anatrehany, dia naneso Azy, nanao hoe:, "Arahaba, Mpanjakan'ny Jiosy. "
27:30 Sy ny rora azy, dia nalainy ny volotara ka nikapoka ny lohany.
27:31 Ary rehefa naneso Azy, dia nendahany ny akanjo ivelany, ary niakanjo azy ny fitafiany, ary dia nentiny Izy mba hohomboana amin'ny hazo fijaliana.
27:32 Fa raha mbola nivoaka, dia tonga teo ny olona avy any Kyrena, atao hoe Simon, izay izy notereny hitondra ny hazo fijaliany.
27:33 Dia tonga teo amin'ny tany atao hoe Golgota izay, izay no fitoeran'ny Kalvary.
27:34 Dia notolorany divay hosotroiny, niharo zava-mangidy. Ary nony nanandrana izany, tsy nety nisotro izy.
27:35 Avy eo, rehefa voahombony tamin'ny hazo fijaliana Izy, dia nizara ny fitafiany, antsapaka, mba hahatanteraka izay nolazaina tamin'ny alalan'ny mpaminany, nanao hoe:: "Ireo nizara ny fitafiako ho azy, ary ny tonian'ny ny vestment nanaovany loka izy ireo. "
27:36 Ary nipetraka teo, dia niaro azy izy.
27:37 Ary napetany ny fiampangana ambony lohany, nosoratana toy ny: Ity no Jesosy, MPANJAKAN'NY JIOSY.
27:38 Ary nisy jiolahy roa nohomboana tamin'ny hazo fijaliana: ny anankiray teo amin'ny ankavanany, ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany.
27:39 Fa izay nandalo niteny ratsy Azy, nihifikifi-doha,
27:40 ary nanao hoe:: "Ah, mba ho mandrava ny tempolin'Andriamanitra ary ao anatin'ny telo andro indray izany! Vonjeo ny tenanao. Raha Hianao no Zanak'Andriamanitra, midina hiala amin'ny hazo fijaliana. "
27:41 Ary toy izany koa, ny mpitarika ny mpisorona, sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona, naneso azy, nanao hoe::
27:42 "Ny sasany novonjeny; tsy hainy vonjena ny tenany. Raha Izy no Mpanjakan'ny Isiraely, aoka hidina hiala amin'ny hazo fijaliana, ka dia hino Azy.
27:43 Natoky an'Andriamanitra; dia izao, Aoka Andriamanitra no hanafaka azy, raha izay sitrapony izy. Fa hoy izy:, 'Izaho no Zanak' Andriamanitra. ' "
27:44 Avy eo, ny jiolahy izay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana tsiny azy koa ny tena zavatra mitovy.
27:45 Ary hatramin'ny ora fahenina, dia maizina ny tany manontolo, na dia hatramin'ny ora fahasivy.
27:46 Ary nony tokony ho tamin'ny ora fahasivy,, Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery, nanao hoe:: "Ely, Eli, Lamma sabacthani?", Izany hoe, "Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana no dia mahafoy Ahy?"
27:47 Ary tamin'izany ny sasany izay nijanona ireo sady mihaino teo nanao hoe:, "Io lehilahy io miantso an'i Elia."
27:48 Ary ny anankiray teo aminy, mihazakazaka haingana, naka spaonjy dia nameno azy tamin'ny vinaingitra, Ary napetrany teo amin'ny bararata iray, dia nomeny ho hotsentsefin'i Jesosy.
27:49 Na izany aza tena, ny sasany nanao hoe:, "Andraso. Aoka hojerentsika raha ho avy i Elia mba hanafahana azy. "
27:50 Avy eo Jesosy, indray niantso tamin'ny feo mahery, nanolotra ny ainy.
27:51 Ary indro, ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia triatra nizara roa toko, hatrany ambony ka hatrany ambany. Ary ny tany dia nihozongozona, ary nitresaka ny vatolampy masina.
27:52 Ary nisokatra ny fasana. Ary maro ny fatin'ny olona masina, izay efa matory, nitsangana.
27:53 Ary nivoaka avy teny amin'ny fasana, taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, dia nankany an-tanàna masina, ka niseho tamin'ny maro.
27:54 Ary ny kapiteny sy ireo izay niaraka taminy, fiambenana Jesosy, raha nahita ny horohorontany mbamin'izay zavatra tonga natao, dia tena feno tahotra, nanao hoe:: "Marina tokoa fa, izany no Zanak'Andriamanitra. "
27:55 Ary amin'izany toerana, nisy vehivavy maro, teny lavidavitra eny, izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galilia, nanompo Azy.
27:56 Anisan'izany i Maria Magdalena sy Maria, renin'i Jakoba sy i Josefa, ary ny renin'ny zanak'i Zebedio.
27:57 Avy eo, rehefa hariva ny andro tonga, dia nisy lehilahy mpanankarena avy any Arimatia, atao hoe Joseph, tonga, izay izy koa dia mpianatr'i Jesosy.
27:58 Izany lehilahy izany dia nanatona Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Dia nasain'i Pilato ny vatana mba ho afaka.
27:59 ary Josefa, nitondra ny vatana, nofonosiny madio hotetehina-tenona ny lambany hariry madinika,
27:60 ary nampitoeriny tao amin'ny fasany vaovao, izay efa nolavahany tamin'ny vatolampy. Ary rehefa nanakodia vato lehibe ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy, ka dia lasa nandeha.
27:61 Ary Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray teo, nipetraka tandrifin'ny fasana.
27:62 Ary ny ampitson'iny, izay araka ny andro fiomanana, ny mpitarika ny mpisorona sy ny Fariseo dia nankao amin'i Pilato miara-,
27:63 nanao hoe:: "Tompo ô, efa nahatsiaro fa iny mpamitaka io nanao hoe:, fony Izy mbola velona, 'Rehefa afaka telo andro, , Dia hitsangana Aho. '
27:64 Noho izany, handahatra ny fasana tokony hotandremana mandra-pahatongan'ny andro fahatelo, fandrao avy ny mpianany ka mangalatra mety azy, ka lazao amin'ny olona, Fa efa nitsangana tamin'ny maty. 'Ary izany fahadisoana farany dia ho ratsy noho ny voalohany. "
27:65 Hoy Pilato taminy:: "Manana mpiambina. Mandehana, hiambina azy tahaka ny fantatrareo ihany ny fomba. "
27:66 Avy eo, mandeha mivoaka, dia nahazo ny fasana izy ireo sady mpiambina, famehezana ny vato.